ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝကျောက်ခဲ | Flodeal Inc မှ.
ရုရှားနိုင်ငံသည်အိန္ဒိယသဘာဝကျောက်ခေတ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့အလွန်ကြီးမားတဲ့စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်. အိန္ဒိယကနေသဘာဝအလျောက်ကျောက်များကဲ့သို့အရုရှားကလူ. အိန္ဒိယကနေအများအပြားကသဘာဝကျောက်များရှိပါသည်, ရုရှားစျေးကွက်နှင့် CIS အတွက်ကျော်ကြားနေသော, ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ရုရှားမှာလူကြိုက်အများဆုံးသဘာဝကကျောက်ခဲတို့ကိုဆွေးနွေးကြမည်, အိန္ဒိယကနေထောက်ပံ့ထားတဲ့. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုရှား Clients တွေအနေနဲ့ထံမှလက်ခံရရှိသောအမိန့်အပေါ်အခြေခံပြီးဒီ list ကိုပြင်ဆင်အဖြစ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်လက်ခံရရှိ.
ရုရှားအိမ်ပိုင်ရှင်အိန္ဒိယကနေစကျင်ကျောက်များဟာအလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုများ, သူတို့ပရီမီယံကိုဝယ် အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်. Following are the most Popular Indian Marble in Russia :
အဆိုပါ Verde အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အိန္ဒိယအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း ရုရှားမှာ. ဤသည်စကျင်ကျောက် Udaipur Rajasthan အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစား 60x30x2 စင်တီမီတာဖြစ်ပါသည် & အတွက်ကျပန်းပြား2နှင့်3စင်တီမီတာအထူ. ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်, ပြတင်းပေါက်ထားလိုက်တော့နှင့်ရုရှားအတွက်ရေချိုးခန်းမြို့ရိုးကိုဝတ်.
မိုးသစ်တောတွေဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းသို့မဟုတ် Bidasar ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းမြို့ရိုးကိုဝတ်တစ်ခုလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုနှင့်ရုရှားအတွက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. ဤသည်ကျောက်ကိုလည်းအလွန်ရေချိုးခန်းအတွက်အသုံးပြုသည်. အဆိုပါလူကြိုက်များအရွယ်အစားအတွက် မိုးသစ်တောဘရောင်းစကျင်ကျောက် Big ပြားနှင့် 60x30x2 စင်တီမီတာရှိပါတယ်. ဤသည်စကျင်ကျောက် 305x305x10 မီလီမီတာနှင့်အ 610x305x10 မီလီမီတာလည်းရရှိနိုင်, ရုရှားစျေးကွက်အတွက်လည်းလူကြိုက်များတဲ့အရွယ်အစားအရာဖြစ်ပါသည်.
မိုးသစ်တောရွှေကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုလည်းအိန္ဒိယကနေပရီမီယံစကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ရုရှား၌အလွန်လူကြိုက်များရာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်အိန္ဒိယ Churu ခရိုင်အနီးကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအစဟုချေါသညျ Bidasar ရွှေကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း. ရုရှားအိမ်ပိုင်ရှင်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့ဤစကျင်ကျောက်ကိုသုံးပါ, ပြတင်းပေါက်ထားလိုက်တော့, နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဘို့ backsplash. အဆိုပါ Bidasar ရွှေကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း၏တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက်ရရှိနိုင်2စင်တီမီတာနှင့်360x30x2 စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားအတွက်စင်တီမီတာအဖြစ်အုပ်ကြွပ်, 305မီလီမီတာ x305x10, 610မီလီမီတာ x305x10.
ဖြတ်ထားတဲ့ကြက်သွေးလိုင်းများနှင့်အတူတစ်ဦးကလှပသောအစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်. ဤသည်စကျင်ကျောက်ရရှိနိုင်အလှဆုံးဂေါ်လီလုံး၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ. အဖြစ်လူသိများမိုးသစ်တောတွေမှာအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်သာမန် Bidasar အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း ရုရှား၌လူကြိုက်အများဆုံးဂေါ်လီလုံးတစျခုဖွစျသညျ. ဒါကမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအသုံးပြုသည်, မြို့ရိုးကိုဝတ်, နှင့်ရေချိုးခန်း. အဆိုပါ Bidasar အစိမ်းရောင်စကျင်ကျောက်နဲ့ Big တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက်ရရှိနိုင်, ပွတ်ကွက်များ, နှင့်ကောင်တာများအရွယ်အစား.
ကျောက်အလွန်အားကောင်းတဲ့သဘာဝအလျောက်ကျောက်များဖြစ်ကြပြီးမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတှကျအသုံးပွု, အခင်း, အထိမ်းအမှတ်နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်. အိန္ဒိယကျောက် ရုရှားနှင့် CIS နိုင်ငံများတွင်အလွန်ကျော်ကြားများမှာ. ကျနော်တို့ရုရှားစျေးကွက်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များနေသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျောက်အောက်ပါပါပြီ.
နယူးမှာ Imperial နီကျောက်ရုရှားစျေးကွက်အဖြစ်အနီးအနားကနိုင်ငံတွေအတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်. ဒါကအိန္ဒိယကနေအနီရောင်တောက်တောက်အရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်၏လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစား 60x30x1.8 စင်တီမီတာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အသုံးပြုသည်. ငါတို့သည်လည်းသေးငယ်ပြားနှင့် gangsaw အရွယ်အစားပြားထဲတွင်နယူးမှာ Imperial နီကျောက်အောင်.
ပရီမီယံအရည်အသွေး Absolute က Black ကျောက်ရုရှားတွင်မဆိုသံသယလူကြိုက်အများဆုံးကျောက်မပါဘဲဖြစ်ပါသည်. ဤသူကားအ အစိုင်အခဲအနက်ရောင်ကျောက် နည်းနည်းအကွာအဝေးကနေမမြင်ရတဲ့နေသောအလွန်ချော, ငွေ flecks နှင့်အတူ. ရုရှားနိုင်ငံအတွက် Absolute က Black ကျောက်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစား 60x30x1.8 စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဝယ်လိုအားလည်းရှိပါသည် 1.5 ဒီကျောက်အတွက်စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်. ဤရွေ့ကားအရွယ်အစားအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. ထိုကဲ့သို့သော 100 ဦးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားရှိပါတယ်×80 ကွဲပြားခြားနားသောအထူအတွက်လူကြိုက်များလည်းစင်တီမီတာ, အထိမ်းအမှတ်နှင့်အထိမ်းအမှတအောင်အတှကျအသုံးပွုသော.
အဆိုပါအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်အိန္ဒိယကနေအကျော်ကြားဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ရုရှားစျေးကွက်အလွန်ကဒီကျောက်ဝယ်ယူ. ရုရှားမှာ, ဒီကျောက်များအားဖြင့် High-end မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အသုံးပြုသည်. ဒါကတစ်ခုစျေးကြီးကျောက်နှင့်ရုရှား Importers ယေဘုယျအားဖြင့်မဝယ် အရည်အသွေးမြင့်က Black က Galaxy ကျောက်. ဒီကျောက်ကျော်ကြားသည်အရွယ်အစားအတွက် Big ဂျမ်ဘိုပြားဖြစ်ပါသည်2နှင့်3စင်တီမီတာ, တန်ပြန်ပြားအတွက်2နှင့်3အခင်းအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ 60x30x1.8 စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားအတွက်စင်တီမီတာနှင့်အုပ်ကြွပ်.
အဆိုပါ Tan ကဘရောင်းကကျောက်ပြင်ပအခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, ရုရှား၌မြို့ရိုးကိုဝတ်. ဒါဟာရုရှားစျေးကွက်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. 60x30x1.8 စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစား Tan ကဘရောင်းကကျောက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကျောက်ပိုလန်အတွက်ရရှိနိုင် & Flame Finish. အဆိုပါ Flammed ပြီးကျယ်ပြန့်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည်. အဆိုပါကတည်းက Tan ကဘရောင်းကကျောက် တစ်ဦးထက်ပိုသောယူနီဖောင်းဘရောင်းကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုသည်, လိုအပ်မှုကိုအညိုရောင်ကျောက်သည်အဘယ်မှာရှိ.